ezé whitening | Best Way to whiten Ezé Guide
posts akpado "ezé enwu gbaa"
E nwere ọtụtụ whitening na ngwaahịa si n'ebe na ike inyere gị aka tufuo stains ma ọ bụ odo ezé. Ị ga-ahụ enwu gbaa ibe, a tree jupụtara whitener ma ọ bụ whitening ibe. Ndị a ụzọ niile bụ oké uzo ozo maka oké ọnụ ọkachamara enwu gbaa.
Strawberries nwere ike ji mee ka a eke ụzọ whiten ezé. The eke ogige dị na strawberries ga whiten ezé n'ejighị ọgwụ. Ị nwere ike Mash na strawberries n'ime a tapawa na i nwere ike abọ on ezé gị na mgbe ahụ ka ọ na-anọdụ ruo ọtụtụ minit ma ọ bụ bee a strawberry na ọkara, mgbe ahụ-ete ya jidesie gị ezé ruo nwa oge.
NDỤMỌDỤ! Mkpụrụ osisi ndị a ukwuu, na eke ụzọ whiten ezé ụfọdụ n'ime oge. Otu ihe atụ nke ụfọdụ mkpụrụ osisi na-arụ ọrụ dị ukwuu na whitening ezé gị ga-abụ strawberries na oroma.
Jide n'aka gị ezé na-ịkpachapụ anya kpochara n'ihu iji home whitening ezé Usoro. Whitening ezé ngwaahịa ga-arụ ọrụ kasị mma ma ọ bụrụ na ị na-etinye ha na ezé dị ọcha. Ọ bụrụ na ezé gị na-adịghị ọcha mgbe ị na-amalite whiten ha na e nwere ezigbo ohere na n'ihi ike ịbụ mkpumkpu na-ahụ.
Ezé whitening ibe ndị a dị ọtụtụ ebe na ukwuu ọnụ. Ị nanị kwesịrị ebe ahụ warara on ezé gị, mgbe ahụ na-ahapụ ya n'ebe ahụ maka a kwuru kpọmkwem oge oge dị ka ọ dị ọcha ma na whitens ezé gị. ozugbo ewu ewu, whitening ibe enwekwaghị ihu ọma ọtụtụ n'ihi na ha na ogbenye pụta.
NDỤMỌDỤ! The ezé whitening na ngwaahịa nwere ike ime ka ezé gị chebaara ngwaahịa ị na-eji. Ọ bụ na-egbu mgbu ọ bụ ezie na ọ bụ naanị nwa oge.
Mkpa ka ị nnọọ anya mgbe eri ma ọ bụ na-aṅụ mgbe nwere na-enwu gbaa nke ezé usoro mere. Ezé gị ga-ntụpọ ọzọ mfe etinye obi ha dum stains mgbe ha na e whitened. Ọ dị mkpa izere ọchịchịrị acha oriri na ọṅụṅụ mgbe gị ọhụrụ whitened ezé. Kọfị bụ ihe atụ nke ihe ga-adị mfe etinye obi gị dum site ezé gị na nwere ike ime ka achagharị.
Ihe kacha mkpa i nwere ike ime iji nweta a magburu onwe-acha ọcha ọnụ ọchị bụ gaa dọkịta ezé mgbe niile cleanings. Jide n'aka na-aga n'ihi na a dị ọcha ọ bụla 6 ọnwa. -Echeta mgbe niile ime ka a ọhụrụ oru mgbe dọkịta ezé ya ka ị ghara ichefu mgbe e mesịrị. Gwa onye gị na eze na ụlọ ọrụ na-echetara gị tupu na a kpọrọ na fon.
NDỤMỌDỤ! -Asa ezé mgbe ọ bụla nri na-a oké ụzọ na-ha free si stains. Ọtụtụ ihe oriri na ọṅụṅụ nwere ike n'iku ezé gị.
Ebu a obere atu na ị na-eji mgbe eri sugary oriri. Ndị a na ato uto arapara ezé gị, na-eme ka staining ma ọ bụ tinye ihe i nwere ike na-ama nwere. Mgbe eri ihe na ato uto, asa ezé gị ruo nwa oge. Ntacha eze dịghị mkpa; dị nnọọ sikrob ezé gị na ahụ itucha ọma na mmiri.
Ntụ iji koo achịcha, mgbe jikọtara na peroxide, Nleta a mma ntacha eze na-ebelata bacteria na eliminates stains. Gbalịa na-asa ezé na ihe ngwọta maka n'etiti 5-10 nkeji. Always kpachara anya ka ị na-agaghị eleghara gabiga ókè ike, dị ka ngwakọta nwere ike n'ezie iwe gị goms.
NDỤMỌDỤ! Onye nke kasị mma ụzọ iji hụ na gị ezé ga-anọgide na-acha ọcha bụ melite mgbe nile emek maka na ịga na dọkịta ezé ọcha ha. Naanị a ọkachamara ihicha pụrụ imezi afọ nke tartar Mee-elu na achagharị.
Ọ bụrụ na ezé gị na-amalite tingling ma ọ bụ na-eche mwute mgbe eji a ngwaahịa na whitens ezé, a kwụsị ojiji ozugbo. I nwere ike na-eme ihe mmebi karịa ị maara na ezé gị, n'ihi ya, ọ kasị mma na mgbe ahụ na-a ọkachamara nkwanye. Gwa onye gị na dọkịta ezé banyere gị nhọrọ.
NDỤMỌDỤ! Mgbe flossing na brushing ezé gị so ná ndị kasị ịga nke ọma ụzọ na whitening ezé gị. Site na iji ndị a usoro, ị ga-ebelata ihe e dere ede buildup, a kacha akpata ezé achagharị.
Mgbe niile na-eso nile ntụziaka n'ụlọ enwu gbaa na ngwaahịa ị na-eji. Nke a nwere ike iwe gị úkwù ezé na agbụ na emebi gị teeth.Use ezé whitening na ngwaahịa kpọmkwem na naanị dị ka a gwara na emeputa.
Mgbe gị na-enwe a ezé whitening usoro, ọ dị mkpa ka ị asa ezé gị mgbe ọ bụla nri. Ọ bụrụ na ị ka nri ewu on ezé gị, ọ pụrụ ime ka nje na ibu n'ọnụ gị. Bacteria nwere ike dị nro ezé gị, nke nwere ike ime ka ha ndị na-enwekarị mebiri na arịa ọrịa.
NDỤMỌDỤ! zere sịga, kọfị na ike tii. Ihe ndị a nwere ike atụgharị gị ezé aja aja.
Na-aṅụ kọfị na ndị ọzọ na staining dị mmiri mmiri site a ahịhịa bụ ụzọ dị irè nke na-acha ọcha ezé. The ahịhịa na-enye ego nke oge na-eme ka ezé staining. The mmiri mmiri ga uzo ezé gị na-aga ogologo ala ọnụ gị.
-Etinye strawberry ihe ọṅụṅụ on a atu na ahịhịa dị ka ihe kwesịrị ekwesị whiten ezé gị. The acid site na ihe ọṅụṅụ dị nro gị nha nha Enamel, otú a kwe gị ọcha pụọ ​​ukwuu nke achagharị si ezé gị. Ị ga-enwe ike iweghachi gị nde-dollar ọnụ ọchị n'ihi nnọọ nta karịa otu nde dollar iji usoro a.
NDỤMỌDỤ! Mgbe whitening ezé gị, tinye Vaseline na-echetara gị na-amụmụ ọnụ ọchị. O nwere ike a mma flavor, ma ọ dị mma na-eke a mgbochi nke na-enye gị ezé-echebe site staining maka a di na nwunye nke awa.
Asa ezé gị mgbe niile iji hụ na ị chọrọ ịnọgide na a oké ọnụ ọchị. Food na ihe ndị ọzọ nwere ike iru on ezé gị na n'iku ha mgbe oge ụfọdụ. Ị kwesịrị ị na-enweghị ka ichegbuwe onwe banyere nha nha achagharị ka ogologo dị ka ị nọgide na-enwe mgbe nile a mgbe nile ezé-brushing eme.
Izere iji acha mouthwashes. Ndị a mouthwashes nwere ike freshen gị ume, ma ha ga-eleghị anya n'iku ezé gị na usoro. Mmanya bụ ihe mgwa kasị, na nwere ike imerụ gị ire na úkwù ezé na agbụ na ike ga-etinye obi gị dum n'ime gị n'ọbara.
NDỤMỌDỤ! Ị chebe gị ezé site brushing ha. Ị nwere ike dị ka mma were ya a nzọ ụkwụ n'ihu, ma malite iji a ntacha eze na whitens ezé gị.
Ọ na-nwere ike ime ka mmetụta ọsọ ọsọ na ndị ọzọ susceptible ka staining.
Kọọrọ gị dọkịta ezé banyere healthiest ụzọ whiten ezé gị tupu ịzụrụ ihe ọ bụla. Gị dọkịta ezé ga-ama ihe ndị kasị mma nhọrọ si n'ebe, na ọ ga-enwe ike ịgwa gị banyere mmetụta metụtara ụfọdụ usoro maka ezé enwu gbaa.
NDỤMỌDỤ! Eme ka a àgwà nke flossing ezé gị. Flossing aka wepụ ihe e dere ede, nke-achagharị okwu na gị ezé.
Ọ bụrụ na ọnụ gị na-amalite na-emejọ, ozugbo kwụsị whitening. Ọ bụrụ na ị na-enwe uche na-eji whitening na ngwaahịa, ị ga-ozugbo kwụsị ojiji nke ahụ mejọrọ ngwaahịa ruo mgbe i nwere ike kwurịta okwu ahụ a dọkịta ezé.
N'ihi acha ọcha ezé, adịghị aṅụ tii na kọfị,. Ndị a ọṅụṅụ discolor ezé. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ kọfị, Jide n'aka na ị itucha ọnụ gị si ozugbo ị na-eme. Nke a nwere ike inyere akwụsịlata ọ bụla mmetụta ọjọọ ndị a ọṅụṅụ nwere on ezé gị.
NDỤMỌDỤ! Gbalịa ka ị ghara iri citrus mkpụrụ osisi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ezé gị anya acha ọcha. Na mgbakwunye, zere ihe ọṅụṅụ nke citrus mkpụrụ osisi.
Kọọrọ a nha nha whitening usoro. Adịghị whiten ezé gị mgbe ịlụ enyocha maka cavities ma ọ bụ ihe ọ bụla eze na-arụ ọrụ.
Ị kwesịrị ị na Mike akọrọ n'ọnụ mmiri epupụta na oroma peels n'ime a powder. Tinye mmiri ka a ntụ ntụ na ahịhịa na a ngwakọta. Ime nke a ga-nyere aka gbochie ọrịa agbụ na cavities.
NDỤMỌDỤ! Jiri ukpa osisi n'ụgbụgbọ ka whiten ezé gị. Were a obere bit nke n'ụgbụgbọ na-ete ya na gị ezé.
Jiri hydrogen peroxide na-whiten ezé gị. I nwere ike ime nke a nanị site na-azọnye a washcloth ma ọ bụ ihe ọ bụla owu ihe onwunwe tinye n'ime ihe ngwọta. -Ete ndị mmiri ákwà n'elu ebe gị ezé na a mgbe niile. The peroxide na-enyere Mee stains na asacha ákwà ga-eme ihe dị ka a scrubber.
Ụfọdụ eke ịgba akwụkwọ ga-enyere whiten ezé, dị ka apple cider mmanya. Nke a na usoro na-enyere aka iwepụ nje bacteria na stains n'ọnụ gị, dị ka ọ na-asachapụ ezé gị na usoro. Ikwacha akpiri otu ugboro n'ụbọchị, n'ozuzu nke ụtụtụ, na apple cider mmanya, na-eso ya site na-asa ezé.
NDỤMỌDỤ! Asa ezé gị na nnu. Nnu bụ a usọbọ na-eke na pụrụ inye aka tufuo nke stains on ezé gị.
Chase Unyi-eme ọṅụṅụ na mmiri. A iko mmiri itucha egbochi-ahụ ntụpọ na-eme ka ihe ọṅụṅụ si mwube. Echiche ọzọ bụ na-eji a ahịhịa mgbe na-aṅụ ọchịchịrị-acha ọṅụṅụ.
Asa ezé gị na a banana bee. Usoro a dị nnọọ mfe ma dị ọnụ, otú i nwere ike mejuputa ya n'ime gị eme kwa ụbọchị. Ozugbo ị peeled na banana, -agba ọsọ na bee n'elu ezé gị tupu ị abọ ha. , Mgbe i mesịrị nke a, asa ezé gị ka ị ga-eme. Nke a ga-enye gị ozugbo enwu gbaa na-arụpụta.
Jiri ihe oroma bee si adụ n'akụkụ ka tufuo stains na-eme ka ezé gị. I nwekwara mix mịrị amị oroma bee na finely ground n'ọnụ mmiri doo ime ka a tapawa maka ezé gị. Jide n'aka na-itucha ọnụ gị juputara afterwords iji wepu niile mkpụrụ sugar.
-Adịghị ege bụla ntacha eze na-ekwu na ha ga-enye gị acha ọcha ezé. Ha nwere ike inye gị a nta whitening mmetụta, ma na-aghọta na ndị ọzọ usoro na-eleghị anya mkpa. Ọ bụrụ na ị ka na-ahọrọ na-eji a whitening ntacha eze, -agbalị hie onye nwere mmiri soda na ya.
Gwa onye gị na dọkịta ezé iji nye gị a jel nwere ike tinye n'ọrụ n'ụlọ na-enyere whiten ezé gị anya acha ọcha. A Usoro nwere ike ime ka ezé gị site ruo asatọ shades!
Ọ bụrụ na ị na-agbalị iji nweta acha ọcha ezé, gaa na dọkịta ezé na ha kpochara na dị ka mgbe ị nwere ike. Mgbe eze na-cleanings bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị irè ị ga na-etinye gị enwu gbaa nke ezé Usoro. Mkpa ka ị gara na gị dọkịta ezé maka cleanings dịkarịa ala ọ bụla ọnwa isii.
Gị mkpa iji hụ na ị nwere ikike atu kwesịrị ekwesị na-asa ezé gị ụdị. Eletrik atu bụ karịsịa mma na wepụ ihe e dere ede na stains akwakọba on ezé gị ụbọchị ọ bụla. A ga-enwe ezé gị ndammana ọcha na acha ọcha.
Ị ga-ọcha na whiten ezé gị ma ọ bụrụ na ị na-eso a kwa ụbọchị na ntacha eze na flossing. Họrọ ngwaahịa na nwere mmiri soda dị ka a eke mgwa enwu gbaa dị ka ọ bụ ukwuu irè na wepụ stains.
I nwere ike na ezé gị acha ọcha site na iji a ahịhịa mgbe ọ bụla whitening procedure.Drinks na elu-etoju nke na agba pigments nwere ike n'iku ezé gị. Na iji ahịhịa ga-egbochi n'ihu ezé si enwe mmekọrịta nke ha na staining ọgwụ.
Eri ahụ ike nri na-crunchy. The abrasiveness nke crunchy oriri tinye nhicha ike ezé gị mgbe ị na-ata ya. Tara ha dum, adịghị ebipụ ha ruo!
Mee onwe gị a strawberry tapawa maka brushing ezé. Strawberries Ọ dịwo anya a akwanyere ka whiten ezé gị. Mix ụfọdụ tapawa onwe gị, ị ga-mkpa 1/4 cup mmiri, ntụ iji koo achịcha (1/2 cup) na atọ strawberries na e gwere.
Adịghị ese siga sịga ma ọ bụ sịga. Ma ndị a na-e nwapụtaworo na-discolor ezé gị na-discolored. Agbalị ịkwụsị ise siga na-ezé gị si mbịne odo. Ọ bụrụ na ị na-adọga ịkwụsị ise siga, ịkpọ dọkịta gị maka aro ma ọ bụ ọgwụ iji nyere gị aka na usoro. Gị mkpa nza nke oma support na ihe siri ike ndụmọdụ.
Naa, unu nwere enweghị ihe ngọpụ maka ịnagide a odo ọnụ ọchị. I nwere ike inwe a mma ọnụ ọchị site na iji otu n'ime ọtụtụ whitening ezé ngwaahịa mere maka ụlọ ojiji. The enwu gbaa ngwa iwu gị nwere ike iji n'ụlọ ya dị ka ọnụ ala karịa whitening nke ezé usoro, na ha ihu ọma na-enye gị otu ihe ahụ N'ihi.
Ihe site whiten Ezé Guide - June 5, 2016 na 1:02 AM
Categories: Home Dabere na whiten Ezé Tags: mkpụrụ osisi, strọberị, ezé enwu gbaa, enwu gbaa na ngwaahịa, enwu gbaa ezé